Biyaha Mars: wax walba oo laga ogyahay iyo daraasado cusub | Saadaasha Shabakadda
In muddo ah, waxaa la ogaa in Mars ay biyo ku dhex jiraan. Waxa aan la ogeyn waa inta biyo ee ay dhab ahaan yeelan karto. Sida aan ogsoonahay, Mars waa bartilmaameedka NASA oo si fiican ayaa loo darsaa. Xog cusub ayaa lagu muujiyay biyo marsada la xidhiidha dhulka hoose ee cirifka koonfureed. Daraasiin harooyinka dhulka hoostiisa ah ayaa u muuqda in laga helay aaggan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo xilligan laga yaqaanno biyaha ku yaal Marska.
1 Cirifka Koofureed iyo biyaha ku yaal Mars
2 Cilmi baaris ku saabsan biyaha Mars
3 Goobaha cadcad
4 Xaaladaha nolosha
Cirifka Koofureed iyo biyaha ku yaal Mars
Illaa iyo hadda, waxaan ognahay in dhulka hoostiisa ee Mars ay ku jiraan keyd baraf biyo ah iyo kaarboon laba ogsaydh oo barafoobay meelo, loo yaqaan baraf qallalan. Kaydadkaani waxay ku jiraan lakabyo kala duwan, taas oo noo oggolaaneysa inaan si wanaagsan u diiwaangelino taariikhda Mars. Tusaale ahaan, noo oggolow in aan go'aan ka gaarno sida gobollada qaarkood ee Mars ay xilliyadii hore u ahaayeen kuwo qabow si loogu oggolaado qabowgan.
Daraasad cusub oo ay sameysay NASA ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan meelahan dhulka hoostiisa ah. Ma hubo inay calaamadahaasi yihiin biyo dareere ah, laakiin waxay umuuqdaan inay aad uga ballaaran yihiin kuwa laga helay dukumiintiyada asalka ah. Hay'addu waxay u adeegsatay qalabka 'MARSIS' markabka 'Space Express orbiter' ee Wakaaladda Hawada Yurub. Qalabkan raadaarka, cilmi baarayaashu waxay mowjado ugu diri karaan dusha Mars. Iyada oo ku saleysan mowjadaha muuqda ee ay hesho, waxay go'aamin karaan waxa ka hooseeya dusha sare. Tusaale ahaan, barafku wuxuu si fudud uga muuqdaa hirarka radarhalka qaybaha sida dhulka laftiisu ay yihiin kuwo si dhib yar loo dhex galo oo si dhib yar looga muuqdo.
Baadhitaankii ugu dambeeyay wuxuu daaha ka rogay daraasiin qodob oo milicsiga ah oo ku yaal cirifka koonfureed. Aagga ay qoddobadaani ka hadlayaan ayaa aad uga ballaaran sidii markii hore loo malaynayay. Laakiin waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in meelo badan biyaha qabow ay ka hooseeyaan laba kilomitir.
Muxuu tan inoo sheegayaa? Waxaan u baahanahay inaan baaritaan dheeraad ah ku sameyno aaggaas Mars. Soo helitaanadani ma iKu dhiirrigeliso hawlgal cusub goobta-Koonfurta Pole-ka Mars. Rover-ka ku yaal South Pole of Mars wuxuu naga caawin karaa inaan si fiican u fahamno dhaqanka biyaha ee gobolka iyo sida ay faa'iido ugu leeyihiin aadanaha mustaqbalka.
Cilmi baaris ku saabsan biyaha Mars
Maanta, Mars waa lamadegaan barafoobay. Laakiin wabiga iyo bangiyada qalalan waxay muujinayaan in waagii hore, biyuhu ay dul mari jireen dusha meerahan cas. Muddo tobanaan sano ah, saynisyahannadu waxay isku dayayeen inay ogaadaan halka ay biyuhu kaga yaalliin Marska, iyagoo rajeynaya inay fahmaan sida meeraha guduudan uu u noqday dhul qalalan, halka deriskiisa, Earth, badbaadiyey kheyraadka biyaha waxayna noqotay janno nafley ah.
Hadda, iyadoo la soo bandhigayo indha indheynta meerahan qaab cusub, koox khubaro ku takhasusay cilmiga dhulka iyo saynisyahano ku xeel dheer cilmiga jawiga ayaa soo saaray sawir cusub oo ku saabsan taariikhdii Mars: inta badan biyaha ku jira meerahan waxaa laga yaabaa inay ku go'doomaan qolofka dhulka.
Daraasado hore ayaa muujiyay in marka shucaaca qoraxda uu biyaha ka soo jiito Marska hawada, inta badan biyaha Mars wuxuu u baxaa dhanka hawada. Laakiin daraasaddan cusubi waxay ku soo gabagabeyneysaa in biyaha ku yaal Mars ay la soo derseen baxsi hawo ah iyo qabashada dhul ahaan. Waxay kuxirantahay xaddiga biyaha ay ku bilaabaneyso, qaabka cusub ayaa ku qiyaasaya taas inta udhaxeysa 30% iyo 99% waxay ku dhexjiraan macdanta qolofta dhulkahalka inta soo hartayna ay u baxsadaan meel bannaan. Tani waa noocyo ballaaran waxayna u badan tahay inay ku lug yeeshaan laba geeddi-socod, markaa xaqiiqadu waxay ku jirtaa xadkaas.
Haddii qaabka cusubi sax yahay, taariikhda qaan-gaarka ee Dunida waa in dib loo qoro. Waxaa la rumeysan yahay in dhammaan biyaha ku xanniban qolofka Mars maanta ay ka dhigan tahay in markii ay yaraayeen, dusha sare ee Mars ay ka jireen biyo aad uga badan qaababkii hore ee la qiyaasi jiray, iyo in waqtiyadii hore ay ka fursado badan yihiin inta la og yahay. nolosha microbial. Jawiga khafiifka ah ee Mars wuxuu ka hortagaa joogitaanka biyaha dareeraha ah ee dusha meeraha cas. Laakiin biyuhu waxay ahaan karaan kuwo dareera dhulka hoostiisa.
Waxaa jira caddeyn in ay jiraan biyo cusbo leh oo ku yaal Mars, dheecaankan ayaa ah sababta khadadka toosan ee laga helo dusha sare ee godadka inta lagu jiro xilliga ugu kulul Mars. Maxaa intaa ka badan, biyaha dareeraha ah ee ka hooseeya dusha waxay siinayaan jawi ku haboon nolosha meerahan. Natiijooyinka waxay muujiyeen caddayn cusbo fuuq ah illaa afar meelood oo kala duwan. Sidaa darteed, waxa loogu yeero godad qumman oo khafiif ah, oo qiyaastiisu tahay 5 mitir ballaadhan, lana bartay sannado badan, waxaa sabab u ah dhaqdhaqaaqa biyaha cusbada.
Mawjadaha qadka dheer ee qarsoodiga ah waxay u muuqdaan xagaa kasta oo Martian ah, iyagoo umuuqda inay hoos udhigayaan dhaadhaca dhererka dhexe ee cirka koonfurta. Marka qabowgu yimaado, durdurradan ama jeexjeexyada toosan ayaa baaba'aya. Xaqiiqda ah in xogta hadda ay xaqiijineyso in jeexjeexyadaas aan la dayactirin sanadka oo dhan waxay muujineysaa in biyaha dareeraha ah ay ka soo qulqulayaan buuraha iyo dhaadhaca sababo la xiriira heerkulka oo kordhay. Markay xilli qabow timaado way baaba'aan.
Thanks to spectrometric data from CRISM, koox saynisyahano ah oo ka socda machadka Georgia ee Teknolojiyada (USA) ayaa xaqiijiyay joogitaanka cusbada fuuqbaxa sida perchlorates iyo chlorates, oo aad ugu badan meerahan (ilaa 10.000 jeer ka badan dhulka). Marka maxaa hoos u dhig barta qaboojinta biyaha ee 0ºC illaa -70ºC, duruufaha ay suuragalka tahay in lagu helo biyo dareere ah.
Xitaa iyada oo wax walba la helay, dusha sare ee meeraha cas wuxuu leeyahay xaalado deegaan oo aad ugu neceb nolosha. Gaar ahaan, xaaladahaas waxaa lagu aasaasay xaddiga shucaaca ultraviolet ee ka yimaada qorraxda. Si kastaba ha noqotee, xogtan ku saabsan jiritaanka biyaha dareeraha ah ee qaybta dhulka hoostiisa ayaa ka dhigaysa deggenaashaha wax badan oo kafiican nidaamka 'Martian regolith', oo ah halka ay tahay in dadaallada lagu uruuriyo raadinta nolosha mustaqbalka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto biyaha ku yaal Marska iyo wax kasta oo laga ogyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Biyaha marsada